ओली अध्यादेश जारी गराउने तयारीमा - नेपालबहस
मंगलबार , मंसिर ९, २०७७
ओली अध्यादेश जारी गराउने तयारीमा
३ मंसिर २०७७ | १२:१७:३२ मा प्रकाशित
३ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चर्किएको विग्रहले कुन रुप लिने हो ? त्यसको छनक आज दिनभरिको घटनाक्रमले निर्धारण गर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीलतनिवास पुगेका छन् ।
आज दिउँसो १ बजेका लागि पूर्व निर्धारित सचिवालय बैठक नराख्न ओली गएको एक सातादेखि धेरै दौडधूपमा लागे । सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीमाथि गम्भिर आरोप लगाउँदै एकल प्रतिवेदन पेश गरेपछि स्थिति अझै जटिल बनेको हो ।
प्रचण्डले लगाएका आरोपमाथि आजको बैठकले गम्भिर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साथै, ओलीको निरंकुश स्वभावबाट आजित भएका बहुमत सचिवालय सदस्यले आजै स्थायी कमिटीको मिति तोक्ने तयारी गरेका छन् ।
त्यसलाई रोक्न ओलीले गएको साता ठूलै मेहनत गरे, तर संम्भव भएन । सचिवालय बैठक रोक्न विभिन्न दूतमार्फत ओलीले प्रचण्डलाई फकाउने काम गरेपनि सकारात्मक देखिएन । त्यसैले उनले सचिवालय बैठक राखेकै समय पारेर मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक राखेपनि सचिवालय बैठक नरोक्ने पक्षमा बहुमत सदस्य अडिग भएपछि ओलीले अन्तिम अस्त्रका रुपमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । यसै प्रयोजनका लागि फाइनल छलफल गर्न उनी शीतल निवास गएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैले उनले १ बजेका लागि तय गरिएको मन्त्रिपरिषद बैठक २ बजे सारिएको छ ।
पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहले जतिसुकै बलजफ्ती गरेपनि ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद त्याग्न तयार छैनन् । बरु आवश्यक परे पार्टी फुटाएरै भएपनि अर्काे पटक बहुमत ल्याउने कसरतमा छन् । त्यसका लागि उनले राष्ट्रपतिसँग पटक–पटक सल्लाह गरेका छन् । तर राष्ट्रपतिले सकेसम्म मिलाएरै जान आग्रह गरेको र एकपटक प्रचण्डसँग आफूले छलफल गरेपछि मात्रै नयाँ कदम चाल्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
सोही बमोजिम हिजो राति भएको छलफलमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ओलीलाई निशर्त सघाउन नसकिने जानकारी दिएका थिए । आज बस्ने सचिवालय बैठकले ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएको प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गरी स्थायी कमिटी डाक्ने तयारी भएको बुझेपछि ओली राष्ट्रपति कहाँ पुगेका हुन् ।
ओलीले संसदीय दलमा मात्रै आफूलाई जतिको समर्थन प्राप्त हुन्छ सोही आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् । साथै, विभाजनपछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने उनको तयारी छ । ओलीको पक्षमा अहिले ७८ जना र नेपाली कांग्रेसका ६४ जना मिलेर सरकार बन्ने अवस्थाबारे समेत ओलीले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउने भएका छन् ।
प्रचण्ड – माधव नलत्रने
ओलीसँग अब चाहिं वार कि पारकै लडाईं लड्ने पक्षमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष रहेका छन् । जसले जतिसुकै फकाए वा दबाव सिर्जना गरेपनि यसपटक भने प्रचण्ड र माधव पक्ष नझुक्ने पक्षमा अडिग देखिएका छन् । सधैंको झैझगडा भन्दा ओली बिनाको पार्टी नै चलाएर बस्ने पक्षमा प्रचण्ड र माधव देखिएका छन् ।
यद्यपि आफूहरुलाई ओलीले विभिन्न किसिमको मानसिक तनाब र दबाब दिइरहेको भएपनि अब वार की पारमै जाने बताएका छन् । हिजो साँझ प्रचण्डले नेता नेपाललगायत झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग फोनमार्फत छलफल गरेका थिए । आजको सचिवालय बैठक नै अहिलेको बटमलाइन बनाउने विषयमा पाँचै जना नेताबीच सहमति बनेको छ ।
शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक चलखेल
नेकपा भित्रको विवाद मिलाउन वा बढाउन जे भएपनि शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुने गरेको छ । पदीय हैसियत र मर्यादाको ख्यालै नगरी राष्ट्रपति र चिनियाँ राजदूतको अनावश्यक चलखेलले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामै आघात पुगेको छ । राष्टपति जस्तो गरिमामय पदको लाजै नराखी विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको एउटा गुट विशेषको ताबेदारीमा लागेकी छन् । यो उनको पदको मर्यादा विपरित भएको स्वयं सत्ताधारी दलका नेताहरु बताउँछन् ।
उता, चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी मध्य रातमा राष्टपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जान थालेकी छन् । उनले राष्टपतिसँग भेट्दा कूटनीतिक प्रोटोकलको ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यसको धज्जी उडाउने काम भएको छ । यसले नेपालको राष्टिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता माथि नै धावा बोलेको छ ।
बैशाख १२ दोहाेरिने
आजको सचिवालय बैठकले ओलीलाई नराम्रो झड्का दिने निश्चित छ । त्यसलाई छल्ने कुनै उपाय नभएकाले ओलीले आजैको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराई दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फेरि जारी गर्ने भएका छन् । यसअघि पनि बैशाख १२ गते उनले यस्तै अध्यादेश जारी गराएका थिए । तर पार्टी भित्रबाटै त्यसका प्रतिकार भएकाले वाध्य भएर उनी पछि हटेका थिए ।
अब भने स्थिति उनको नियन्त्रणमा नरहने निश्चित भएकाले प्रचण्डलगायत बहुमतलाई आफ्नो राजकीय शक्ति देखाउनकै लागि भएपनि ओलीले अध्यादेश जारी गराउने भएका छन् ।
घुन्सा पुगेर ओलीले भने, म समृद्धिका लागि अघि बढिरहेका छु ! २ घण्टा पहिले
सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न ओलीकाे आग्रह ९ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री ज्यू, अब माखे साङ्ग्लोको अन्त्य गर्नुस ! ९ घण्टा पहिले
प्रचण्ड र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता, ओलीका गतिविधिबारे छलफल १२ घण्टा पहिले
अत्तालिएका ओली १२ घण्टा पहिले
मन बहलाउन ओली लागे इलाम र ताप्लेजुङ १३ घण्टा पहिले
प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतमसहित ५ नेतामाथि सुरक्षा निगरानी
तनहुँबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ २ घण्टा पहिले
गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाईकै पहलमा २ घण्टा पहिले
ग्यास बुलेटले ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु ३ घण्टा पहिले
कोभिड संक्रमित पत्रकार केसीलाइ विमा वापतको एक लाख रुपैया हस्तान्तरण ३ घण्टा पहिले
मानुङकोटमा फोहर सङ्कलन गरिँदै ३ घण्टा पहिले
वृद्धवृद्धालाई सिरक वितरण ३ घण्टा पहिले
बाटो फराकिलो बनाउँदै ३ घण्टा पहिले
क्रसर उद्योगको अनुगमन ३ घण्टा पहिले
किसानलाई वितरण गर्न ल्याइएको नर्सरी सम्बन्धी सामग्री तथा बीउ ३ घण्टा पहिले
कार्यालय परिसरमै गोलभेडा खेती ३ घण्टा पहिले
शिविरमा पशुलाई उपचार गर्दै ४ घण्टा पहिले
पुस्तकालय उद्घाटनमा सहभागी हुँदै सांसद ४ घण्टा पहिले
गणेशलाई किन तुलसी चढाउनु हुँदैन, शास्त्रमा के भनिएको छ ? ५ घण्टा पहिले
पचास शय्याको अस्पतालमा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी बोक्न स्ट्रेचर र डोको १७ घण्टा पहिले
रोकिराखेको जीप आफै गुड्दा बागलुङमा आमा र छोराको ज्यान गयो १४ घण्टा पहिले
मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपी पक्राउ १७ घण्टा पहिले
सरकारको विवेक गुमेको भन्दै राप्रपाले निकाल्यो विज्ञप्ति १० घण्टा पहिले
हिमालयन चितुवा केवन किक बक्सिङको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भिड्ने १३ घण्टा पहिले
सप्तरी राप्रपा संयोजकमा साह सर्वसम्मत चयन ६ घण्टा पहिले
चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारः संरचना हटाउने काम ९७ प्रतिशत सकियाे १० घण्टा पहिले
कर नतिर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज नपर्ने १० घण्टा पहिले
सीमा नाका हिल्सामा खटिएका प्रहरी सिमकोट फर्किए ५ दिन पहिले
सात लाखको चेकसहित ७ जुवाडे पक्राउ ६ दिन पहिले
नेकपा नेता भुसालको मृत्यु ६ दिन पहिले
तालिम उद्घाटन गर्दै ५ दिन पहिले
हुम्लामा समुदायस्तरमै कोरोना फैलिएको पुष्टि ६ दिन पहिले
हुम्लाका विद्यालय बन्द, आवतजावतमा रोक ! ५ दिन पहिले
व्यानपाले नागरिकसँग मत सर्वेक्षण गरी नीति र कार्यक्रम बनाउने १३ घण्टा पहिले
साँगेमा धान काट्दै महिला ४ हप्ता पहिले
नेकपाको सचिवालय बैठक ४० मिनेटमै स्थगित १ हप्ता पहिले
छुट्टाछुट्टै आगलागी, ५० लाखको क्षति ! १ हप्ता पहिले
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अफगानस्तानमा विरोध ३ दिन पहिले
किस्ट अस्पतालमा संक्रमित वृद्धाको मृत्यु ६ दिन पहिले
अभियानकै रूपमा तीनकुनेको खाली जग्गामा गुर्जो राेप्दै ट्राफिक प्रहरी ३ हप्ता पहिले
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव : किशोर प्रधान बलियो कि चन्द्र ढकाल ? ३ दिन पहिले
कसका लागि बन्यो बालुवाटारमा हेलिप्याड ? २ हप्ता पहिले
पश्चिमी सीमामा सधैं समस्या १ वर्ष पहिले
कांग्रेस सांसदका अगाडि सभामुख मौन १० महिना पहिले
पायो राप्रपा संयुक्तले राजनीतिक दलको मान्यता, हलो निर्वाचन चिह्न २ वर्ष पहिले
सशस्त्रको गुल्म शिलान्यास गर्न गृहमन्त्री छाङरुमा ! २ महिना पहिले